बेवास्ता गरे जीवनभर पछुतो बिहान उठेर कहिलै नगर्नुहोस् यी ४ काम – Naya Kura Daily
बेवास्ता गरे जीवनभर पछुतो बिहान उठेर कहिलै नगर्नुहोस् यी ४ काम
October 18, 2020 101
एजेन्सी । हामी विश्वकै मानिस नीति तथा जीवन शास्त्रमा एकदमै विश्वास गर्छौ । धार्मिक ग्रन्थहरु भन्दापनि निक्कै माथी हुन्छन् नीतिशास्त्र । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको चै चाणक्य शास्त्र हो ।यो विश्वकै मानव जीवनमा अति जरुरी बनेको छ । यसैले दुनियाँले नै यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । चाणक्यको नाम विभिन्न शास्त्रमा एकदम सम्मानका साथमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
चाणक्यनीति बचन विश्व भरि नै प्रचलित बिधि हो। चाणक्य पाटलीपुत्रका विद्वान थिए। चाणक्यनीति बचनले हर कोहिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मदत गर्छ।चाणक्यको वचनलाइ हाल सम्म पनि कसैले इन्कार गर्न सकेका छैनन्। उनले भने अनुरुप दिनको सुरुवात गर्नाले दिन सोचेको भन्दा पनि राम्रो संग बित्नेछ। आज हामी चाणक्य नीति अनुरुप बिहान उठ्दा कस्ता बस्तुहरु देख्नु अशुभ हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिदैछौ। कुन–कुन बस्तुहरुलाई बिहान उठ्दा देखियो भने नराम्रो हुन्छ त ?
अधिकांश मानिसहरु बिहान उठेर सबै भन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने गर्छन। कोहि व्यक्तिहरु यसो गर्नु दैनिक बानि हुन सक्छ। तर शास्त्र अनुसार बिहान उठ्न साथै ऐना हेर्नु दुर्भाग्यको कारण हो। यसो गर्दा पुरै दिन नकरात्मक संग चल्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले सोच विचार गरेर मात्र बिहानको समयमा ऐनाको अगाडी जानु शुभ मानिन्छ।
आफ्नै कसैसंग झगडा
चाणक्यनीति अनुसार बिहान उठ्ना साथ आफ्नै कसैसंग झगडा पर्नु भनेको एकदम गलत काम हो। तर यदि बिहान उठ्ने बित्तिकै कुकुर , बिरालो तथा अन्य कुनै जीव जनावरको बिचको झगडा देख्नुलाई अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ। यस्तो देखेमा उक्त दिन संकटका साथमा व्यतित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा झगडा भईरहेको स्थानबाट केहि टाढा जानु नै उचित हुन्छ। चाणक्यनीतिका अनुसार जसरी हामी बिहान उठ्दा आफ्नै अनुहार देख्नबाट ऐना देखी टाढा हुनु पर्छ त्यस्तै गरि अरु कसैको अनुहार पनि देख्नु अशुभ हुन्छ। यदि यसो भएमा इष्टदेवको ध्यान गर्नु पर्दछ। साथ–साथै भगवानको नाम स्मरण गर्दै उठ्नाले शरीरमा सकारात्मक उर्जा बढ्नुका साथै दिन समेत राम्रो संग बित्ने मान्यता रहीआएको छ।
जीव जनावर तथा गाउँको नाम लिनु हुदैन
चाणक्यनीतिमा उल्लेख भएअनुसार जब हामी बिहानीको नास्ता गर्छौ तब हामी दिनभरी नै स्फूर्ति र ताजगीको अनूभूत गर्छौ। बिहानको समयमा नास्ता गर्नु भन्दा पहिले भुलेर पनि कुनै जीव जनावर तथा गाउँको नाम लिनु हुदैन। शास्त्रका अनुसार यी सबै गर्नुभन्दा बरु हत्केलालाई जोडेर आफ्नो हस्तरेखा हेर्नुलाई शुभ मानिन्छ।
Prevसरकारी सहुलियतको खसी–बोकाको मूल्य प्रतिकिलो ५६० रुपैयाँ
Nextआजदेखि दशैंको पुर्णिमासम्म लकडाउन गर्ने निर्णय
साउदीमा कोरोना संक्रमित नेपाली पत्रकार श्रेष्ठको निधन
चितवनमा ईनारमा डुबेर एक जनाको मृत्यु
जय बुढानिलकण्ठ ! देखेको ३ सेकेन्डमा लाइक गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ
अमेरिकामा १५ सय चराहरू आकाशबाट अचानक खसे
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (2961)
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (2898)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (2488)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (1861)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (1801)
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित (1798)
असल श्रीमानको खोजीमा यि करोडपति यु’वती ! यसरी स’म्पर्क गर्नुहोस् – (1730)
कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने घोषणा ! (1709)
गर्लफ्रेण्ड भेट्न सिड्नी गएका नेपालीले गर्लफ्रेण्डकै साथीलाई रक्सी खुवाइ बलात्कार गरेपछि… (1623)
मानव बलि दिए कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भईन्छ भन्ने सपनामा दर्शन पाएँ त्यसैले दिएँः पुजारी ओझा (1477)
१२ मुखी रुद्राक्ष धारण गर्दा हुन्छ यस्तो चमत्कार
विहानै देखिएका यस्ता चिजले दिनेछ तपाईलाई राम्रो संकेत
विजयादशमीको टीकाको साइत १० : १९ बजे, पश्चिम फर्केर टीका लगाउनु उत्तम
एका बिहानै बिसाल नग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ
सा’त दि’नभित्’रमा त’पाइले सो’चेको का’म ब’न्नेछ बि’ल्कु’लै बे’वास्ता न’गर्नुहो’ला, ॐ ले’खि से’यर ग’रौं!!!